၂၃.၂.၂၀၁၈ ရက်နေ့ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ပါဝင်သော ဦးဟန်ညွန့်(ဥပဒေ) ၏ " အဂတိမှု ကင်းစင်စေ" ဆောင်းပါး
အဂတိကင်းစင်ဖို့ အညွှန်းကိန်းများအကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က တင်ပြခဲ့ပါပြီ။ အဂတိအခြေခံက ဘာလဲ။ ဘာကြောင့် အဂတိဖြစ်ရသလဲ။ အဂတိလိုက်စားမှု၏ အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုသလဲ။ လူ့လောကဓမ္မတာ အနေကြာခဲ့သော အဂတိတရားကင်းစင်ပါ့မလား။ ဘယ်လိုထိန်း ကြ မလဲ။ သရုပ်ခွဲကြပါစို့။
ကျေးဇူးရှင်ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ ဆရာတော်က အဂတိလေးပါး မလိုက်စားခြင်း တရာတော်အား အောက်ပါအတိုင်းဟောကြားထားသည်-
"အဂတိတရား မလိုက်စားခြင်းဟာ လူတွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားမှာ အရေးကြီးတဲ့ (HUMAN DIGNITY) လို့ခေါ်တဲ့လူရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ တရားဖြစ်လို့ အင်မတန်မှ အရေးကြီးတယ်"
"အဂတိလိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေဟာ လဆုတ်ရက်မှာ ထွက်တဲ့လလိုပဲ။ တစ်နေ့တခြား ယုတ်လျော့သေးသိမ်၊ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်၊ ဒါအရေးကြီးတယ်၊ လူရယ်လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင် အဂတိလိုက်စားလိုက်ရင် လူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဟာ ညှိုးနွမ်းပျက်ပြယ်ပြီး မကျန်တော့ဘူးလို့ပြောတာ"
အဂတိမလိုက်စားရင်ဖြင့် လဆန်းရက်မှာထွက်တဲ့လဟာ တဖြေးဖြေး ဝင်းပထွန်းလင်းတောက်ပြောင် လာသလို အဂတိမလိုက်စားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာဟာ တိုးတက်မြင့်မားစေတယ်"
"အဂတိလိုက်စားတယ်ဆိုတာ ဓမ္မလမ်းကြောင်းကနေ သွေဖည်သွားတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားတဲ့ လမ်းကိုလိုက်တာ၊ အဓမ္မလမ်းကြောင်းကို သွားနေတာ၊ ဒုစရိုက် ၁၀ပါးကို ကျူးလွန်စေတာ"
(၁) ဆန္ဒာဂတိ- လောဘသံယောဇဉ်ရှိတဲ့အတွက် အဂတိလိုက်ခြင်း
(၂) ဒေါသာဂတိ- မုန်းတဲ့အတွက် အဂတိလိုက်ခြင်း
(၃) မောဟာဂတိ. အမှားအမှန်ကိုမသိခြင်း
(၄) ဘယာဂတိ. ကြောက်တဲ့အတွက် အဂတိလိုက်ခြင်း
ဒါကြောင့် ဓမ္မလမ်းကြောင်းထက်မှာ မတ်မတ်ခိုင်ခိုင်ရပ်တည်ပြီး လူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ တိုးတက်စေအောင်၊ အပါယ်ကျသောဘေးမှ လွတ်နိုင်အောင် ကုသိုလ်တရားတွေ ပွားများနိုင်အောင်၊ သမထ ဝိပဿနာ ကမ္မဌာန်းကို ပွားများပြီး ဒီအဂတိတရားတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတရားတွေကို အမြစ်မှ ပယ်ရှား၍ ကောင်းကျိုးအဖြာဖြာ ရနိုင်ကြပါစေသော် "
အဂတိလိုက်စားမှုဆိုသည်မှာ - လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူက ရာထူးတာဝန်ကို အလွဲသုံးစားပြု၍ တစ်စုံ တစ်ရာကို ပြုလုပ်ရန် ဥပဒေအညီ ပြုလုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်အား ဥပဒေနှင့်အညီ ရထိုက်သော အခွင့်အရေးပေးရန် သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်အညီ ရထိုက်သော အခွင့်အရေးကို မမှန်မကန် ပိတ်ပင်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်သူထံမှ တံစိုးလက်ဆောင်ကို မိမိအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားသူတစ်ဦးဦးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ပေးခြင်း၊ လက်ခံ ခြင်း၊ ရယူခြင်း၊ ရယူရန်အားထုတ်ခြင်း၊ ကမ်းလှမ်းခြင်း၊ ကတိပြုခြင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ဆွေး နွေးခြင်းအား တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပြုလုပ်ခြင်းကို ဆိုသည်။
[အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃(က)]
တံစိုးလက်ဆောင်ဆိုရာတွင် အဂတိလိုက်စားမှု အလို့ငှာ အဖိုးစားနား သို့မဟုတ် ထိုက်သင့်သည့် တန်ဖိုးမပေးဘဲ လက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ပေးခြင်းပြုသော ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း၊ လက်ဆောင်၊ ဝန်ဆောင်ခ၊ ဧည့်ခံပြုစုခြင်းနှင့် တရားမဝင်သော အခြား အကျိုးခံစားခွင့်များလည်း ပါဝင်သည်။
[အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၃(ခ)]
(၁) ကုလသမဂ္ဂ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကွန်ဗင်းရှင်း (United Nations Convention Against Corruption UNCAC ) ကို ပြဋ္ဌာန်းထားရှိသည်။
(၂) အဆိုပါကွန်ဗင်းရှင်းကို ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် ၅၈/၄ ဖြင့် ၃၁-၁၀-၂၀၁၃ ရက်စွဲနေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းသည်။
(၃) ၁၄.၁၂.၂၀၀၅ တွင် အာဏာသက်ဝင်သည်။
(၄) မြန်မာနိုင်ငံက အဆိုပါကွန်ဗင်းရှင်းကို ၂.၁၂.၂၀၀၅ တွင် ၁၃၇ နိုင်ငံမြောက် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ၂၀.၁၂.၂၀၁၂ တွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။
(၅) မြန်မာနိုင်ငံသည် ကွန်ဗင်းရှင်းအတည်ပြုခြင်း အပြုသဘောလုပ်ဆောင်ချက်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း ပြုလုပ်ပါသည်။
(၆) ယခုအခါ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၃) ကို ပြဋ္ဌာန်းပြီး အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်သည် တာဝန်များထမ်းဆောင်လျက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကွန်ဗင်းရှင်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်မှုဆောင်ရွက်ခြင်များ ပြုလုပ်လျက်ရှိ ပါသည်။ ကွန်းဗင်းရှင်းတွင် အခန်း(၈)ခန်း၊ အပိုဒ်(၇၁)ပိုဒ် ဖော်ပြပါရှိပေသည်။၊
ဥပဒေမူဘောင်အတွင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်။ ယခုအခါ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအား "စတုတ္ထအကြိမ်" ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းကို ရေးဆွဲတင်ပြ ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေသည်။ အများပြည်သူသိရှိ လေ့လာအကြံပြုနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
"အဂတိလိုက်စားမှုတွန်းလှန်ဖို့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာမြှင့်တင်စို့" (Promote Integrity to Counter Corruption) စာတမ်းဖတ်ကြား ဆွေးနွေးပွဲကိုလည်း ရန်ကုန်မြို့တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၂ရက် နှင့် ၂၃ ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် (2018 Action Plan) အား ရေးဆွဲခဲ့ပြီး စီမံချက်အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်သွား မည်ဖြစ်ပါသည်။
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း (၂၀၁၉-၂၀၂၀) နှင့် ကော်မရှင် ကျင့်ဝတ်ရေးဆွဲရေးများကိုလည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာမြှင့်တင်ရေးသည် အဓိကကျသောကဏ္ဍတစ်ရပ်တွင် ပါဝင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပညာပေး ခြင်း၊ အသိပညာပေးဟောပြောဆွေးနွေးခြင်း၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကများ၏ အကူအညီ ရယူခြင်းဖြင့် အဂတိကင်းစင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါမည်။
သက်သေ၊ သတင်းပေးနှင့် တိုင်ကြားသူတို့အား ဥပဒေဘောင်အတွင်း အကာအကွယ်ပေးခြင်းမှာလည်း လိုအပ်ပေသည်။ ဥပဒေဘောင်အတွင်း တတ်စွမ်းသမျှ ဆောင်ရွက်သွားကြရမည် ဖြစ်ပေသည်။
အဂတိလိုက်စားမှုကို ပြည်သူအများစု၏ ဘုံရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီးပါက ပြည်သူအများက ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပြီး နည်းလမ်းစုံဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြမည်မှာ သေချာပါသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ ကပါ ကူညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရပေမည်။
မှားယွင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသော ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဥပဒေနှင့်မညီသော အလွဲ သုံးစား ယိုဖိတ်မှုများ၊ အနိုင်အထက်ပြုကျင့်မှုများသည် ပြည်သူအများလက်မခံ။ ရွံ့မုန်းသော လုပ်ရပ်ဆိုး များ ဖြစ်ပေသည်။ တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ထမ်းများက တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုများ ပီပြင်လာလေ လေ အဂတိ ကင်းစင်လာလေလေ ဖြစ်ပေသည်။
အဂတိကင်းစင်ဖို့ ပြည်သူအများပါဝင်စို့။ ဘယ်သူဘယ်ဝါ၊ ဘယ်ဌာန၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းသည် အဂတိ လိုက်စားနေပါကြောင်း ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ စောင့်ကြည့်လေ့လာ၊ အကဲဖြတ်၊ ဖော်ထုတ်ကြရပေမည်။ လိုအပ် သော အကြံကောင်း ဉာဏ်ကောင်းများပါ ပေးအပ်ကူညီသင့်ပါသည်။
(၁) အဂတိကင်းစင်းစေကြောင်း ပြည်သူအပေါင်းက ကြွေးကြော်နေကြပါပြီ။
(၂) တစ်ယောက်တစ်လက်၊ တစ်တပ်တစ်အားဖြင့် ခရီးသွားနေသည့်ပမာ ဖြစ်ပါသည်။
(၃) "စုစည်းညီညွတ်မှ ခရီးပန်းတိုင်သို့ ရောက်ကြမည်သာ"ဟု တွေးမိသော ကျွန်တော်၏ စေတနာ ဥပဒေအတွေးမျှသာ . . . . .။ ။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ၌ ဦးခင်ဇော် ရေးသားခဲ့သော “ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု မြှင့်တင်ရေး ပညာပေးစာစောင်များအကြောင်း သိကောင်းစရာ(၂)” ဆောင်းပါး
ကျွန်တော်နှင့် တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
၇-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ၌ ဦးခင်ဇော် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ(ပဲခူး) ရေးသားခဲ့သော "ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု မြှင့်တင်ရေး ပညာပေးစာစောင်များအကြောင်း သိကောင်းစရာ" ဆောင်းပါးအား လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါရန် ဖော်ပြအပ်ပါသည်
ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု၊ ကျင့်ဝတ်၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေး
၁၄-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာ၌ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဟန်ညွန့် ရေးသားခဲ့သော “ရှေ့နေနှင့် အစီရင်ခံစာ” ဆောင်းပါးအား လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါရန် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
CPU များ အတွက် အာဂျင်ဒါ (၆)ချက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုမှု ဆောင်းပါးအား ဖော်ပြအပ်ပါသည်
CPU များ အတွက် အာဂျင်ဒါ (၆)ချက် ဆောင်းပါး
“Fighting Corruption: A New Perspective” ဆောင်းပါး
၂၇.၄.၂၀၁၈ ရက်နေ့ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ပါဝင်သော ဦးဟန်ညွန့်(ဥပဒေ)၏ "မျှတသော တရားခွင်" ဆောင်းပါး